Contoh pidato tentang kesehatan dalam bahasa Somalia | Alang-alangkumapalang
Dongeng timun mas dalam bahasa Italia
Contoh surat lamaran kerja bahasa Albania
Cerpen singkat bahasa Swahili
Puisi cinta dalam bahasa Azerbaijan
Contoh pidato tentang kesehatan dalam bahasa Somal...
Lirik lagu TULUS Teman Hidup dalam bahasa yoruba
Lirik lagu NOAH Separuh aku dalam bahasa Shona
Home Uncategories Contoh pidato tentang kesehatan dalam bahasa Somalia
Contoh pidato tentang kesehatan dalam bahasa Somalia
tukang ngabala 06.59 Edit
Gacaliye / Mrs. Macallimow Mr.
shaqaalaha maamulka Gacaliye
Yaa aabbihiis ku faani dhammaan carruurta oo dhan ardayda SMAN 4 AHN
First of dhan aynu ku tukado oo dhan shukriya Ilaah hortiisa Ilaaha Qaadirka dhigay nimcadiisa aan weli la fulin karo qolka this ee caafimaad keadaah oo aan wax ayna duleella u wax alla wixii aannu u.
Munaasabaddan culays fadlan ogolaan hooyada in ay ugu yeedhi oo dhan oo iyaga ka mid si ay u ilaaliyaan caafimaadka jidhkeenna, maxaa yeelay, jidh caafimaad qaba aan oofin karin hawlaha aannu si fiican aad.
Si kastaba ha ahaatee inta badan oo naga mid ah, oo mararka qaarkood illoobin muhiimadda ay leedahay caafimaadka laftiisa. Good sababtoo ah hawlaha waa mid aad u adag iyo caajisnimada noo gaar ah, oo inta badan ka dhigaysa noo illowdaa inay mar walba ilaaliyaan caafimaadka jirkeena.
Sidaas darteed waxaan ku xanuunsadaan iyo hawlaha lagu carqaladeeyey doonaa iyo sida xanuun in aynu adkaysanno, waxaa lacagta kharashka caafimaadka in mararka qaarkood ma aha in yar oo dhawr gani doonaa.
Oo haddii aan rabno in aan eegno, hab nololeed caafimaad leh ma aha wax a qaali ah. Waayo, jimicsi sida orodka, jimicsi, iwm uma baahna lacag aad u badan oo ah meel fanaaniinta. Si kastaba ha ahaatee, waxqabadka waxaa lagu abuuri karo in deegaanka nagu wareegsan.
Intaa waxaa dheer, aad cunto sidoo kale waa mid wax tar leh in caafimaadkeena. By gubaya cuntooyinka ay ku badan tahay nafaqo, ka dibna waxaan u joogteyn karto caafimaadka jidhkeenna.
Carruurtaydii way dhan aabbihiis ku faanayaa
Waxa ay u muuqatay mid aad u habboon haddii mar kale waxaan isku raacnay our malo in caafimaadka waa caasimada asaasi ah oo noo si ay u awoodaan in ay ugu badnaan ku dhaqaaqo. Waayo, in, aynu bilaabaan ka tashanno xagga qudhayada, qoysaska iyo dadka nagu wareegsan si ay u ilaaliyaan caafimaadka jirkeena ka.
Waxaa jira laba wax aan isku dayi kartaa in ay sameeyaan si ay u sii caafimaad si aan wali ka dhigi kara hawlaha prima ah, waxaan ka baran karaa in ay ugu badnaan.
First, Iska ilaali khamriga iyo daroogada. Samee this laga hadlin oo idinku. Marna waxaa isku dayay, sababtoo ah waxaa la khali doonaa. Dhammee sunta Neefta in qiiqa sigaarka. Better in aad cabto biyo badan.
Second, Isku day inaad si firfircoon uga mid isboortiga. Sida fanka legdinta ama jimicsi ama aerobi kubada cagta. Waxa intaa dheer in guulaha duurka this sidoo dabcan waxaad noqon doontaa caafimaad.
Waxaan rajeynayaa, description this waa mid waxtar leh innaga dhammaanteen u bixiyey. Ugu dambeyntii, haddii ay jiraan hadalka ka yar ka farxiya, hooyadiis menghaturkan xumahay.
Sidaas iyo Waxaad ku mahadsan tahay
Tips melancarkan haid
selain minum obat di apotek memfasilitasi menstruasi, banyak cara untuk membantu periode peluncuran berarti akhir setiap bulan tanpa harus ...
Dongeng si Kancil versi bahasa Hausa
Dongeng si Kancil versi bahasa Hausa Wata rana, akwai rayu mai ƙiba alade. Aladu ne sosai m, bakin nan ne mai matukar kaifi fangs da ...
Kisah timun mas versi bahasa Hmong
Kisah timun mas versi bahasa Hmong nyob rau hauv lub hnub ntawm yore, muaj ib tug poj ntsuam uas nyob ib leeg nyob rau hauv lub hav ...
Contoh pidato tentang kesehatan dalam bahasa Somalia Gacaliye / Mrs. Macallimow Mr. shaqaalaha maamulka Gacaliye Yaa aabbihiis ku faani d...
Puisi cinta dalam bahasa Azerbaijan həsrət sinə sıx olduqda ürəkyandıran əziyyət bükülmüş Mən nəfəsi kimi miss səbəbiylə oksigen tükənəcə...
Dongeng timun mas dalam bahasa Italia nei giorni di un tempo, c'era anche una vedova povera che vive da solo nel bordo della fore...
Lirik lagu TULUS Teman Hidup dalam bahasa yoruba O si ẹwà paved inu Ẹniti o ti mi nigbamii Nru dara, pemanja adun O si jẹ nigbagbogbo nib...
Lirik lagu NOAH Separuh aku dalam bahasa Shona Uye kwakange zvakare Old nyaya kuti recur Ukaona zvakare Kubva kuoma rudo iwe ak...
Dari hari kami bertemu Sepertinya aku tidak pernah bisa melupakan. Keajaiban hati mencintai Anda perasaan bahwa kita tidak akan pernah ba...
Copyright © 2014 Alang-alangkumapalang QnC Jelly Gamat - Harga qnc jelly gamat di apotik - harga qnc jelly gamat